Nkọwapụta nka na ụzụ isi nke HDPE High Efficiency Single Screw Extruder - China Isi Nka na ụzụ nkọwapụta nke HDPE High Efficiency Single Screw Extruder Supplier, Factory –Jwell
A na -ejikarị ya eme ihe na mpaghara mmiri na ntinye gas. Nri ngalaba bụ ihe owuwu nwere ihe njikwa okpomọkụ, dịkwa mfe
iji nweta ikike dị elu na extrusion kwụsiri ike. Site na usoro ihe nkedo BM dị elu, ọ nwere ike kewaa ihe HDPE site na ihe siri ike ruo mmiri mmiri.
Site n'iji ụdị ihe mgbochi ihe mgbochi ọhụrụ, onye na -ebubata ihe a nwere ikike mgbapụta dị elu na RPM dị elu yana obere ike oriri, na onye mgbapụta a nwere ike nweta ezigbo agwakọta na ọnọdụ okpomọkụ dị ala, na onye mgbapụta a nwere ike ijikwa ihe ịkpụ ajị anụ iji nweta. ezigbo na ọbụna gbazee okpomọkụ, nke mere na enwere ike izere akara mkpọda dị n'ime mgbidi nke nnukwu ọkpọkọ ọkpọkọ.
Thermoplastic Elastomers Usoro
Pee Okpomọkụ mkpuchi Pipe extrusion Line